Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Uri kurongera kuuya kwemazororo ezhizha uye kufunga nezverwendo? Kana uri kutsvaka mari anobudirira nzira yako inotevera chitima rwendo, kufamba chitima anogona kuponesa mari yako nyore. Pamusoro pe, kana ukaenda kuti nechitima chigaro mangwanani Réservation,…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Pane zvechokwadi hapana nani nzvimbo kuva murudo pane kunhonga Honeymoon Destinations In Europe. With kudekara chitima kufamba, unogona kushanyira matani dzokugara yakanaka yenyu hanimunu. With zvizhinji zuva, bays dzakanaka, yemizambiringa, uye zvisingaperi kudanana hotera uye resitorendi mikana, zviri…
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi Ndeipi nzvimbo iri nani kunakirwa pizza pane nyika yakaigadzira, rudyi? vokuItaly rudo, rudo, rudo ichi chinonaka tudyo-akatendeuka-kudya! Ndosaka cook kuItaly vari ikava yakachena muchimiro ounyanzvi, uye pakupedzisira UNESCO-mvumo! Kungomberereka kumativi Italy, you’ll find pizzerias opened…
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi Hapana anonyatsoziva nyaya chaicho French fries muFrance. Hatigoni kuva nechokwadi kana vachibva France, zvachose. mira, chii?! Yeap, zvawakanzwa zvakanaka – vose Belgians uye French kukuremedzai chikafu ichi, uye vese vane nyaya ku…